$28 bilyan ayaa ku baxaysa haweenaydii ugu horraysaysay ee dayaxa u safaraysa | Somalia News
$28 bilyan ayaa ku baxaysa haweenaydii ugu horraysaysay ee dayaxa u safaraysa
Xigashada Sawirka, NASA
Wakaaladda hawada sare ee Mareykanka (Nasa) ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay qorshaheeda ku aaddan inay ku laabtaan Dayaxa marka la gaadho sannadka 2024.
Iyadoo qayb ka ah barnaamijka loo yaqaan ‘Artemis’, Nasa waxay u diri doontaa nin iyo gabadh hawda sare ee dayaxa markii ugu horreysay, tan iyo markii aadamuhu bilaabay aadiddiisa sannadkii 1972.
Laakiin waqtiga wakaaladda ee hawshaaso waxay ku xidhan tahay Congress-ka oo sii deynaya $ 3.2bn si loogu dhiso nidaamka soo degitaanka.
Cir bixiyeyaashu waxay ku safri doonaan kaabsol u eg Apollo oo la yiraahdo Orion kaasoo oo dah furi doona gantaal awood badan oo la yidhaahdo SLS.
Isagoo kahadlaya galabnimadii Isniinta (waqtiga Mareykanka), maamulaha Nasa Jim Bridenstine wuxuu yiri: “$ 28bn waxay u taagan tahay kharashyada la xidhiidha afarta sano ee soo socota barnaamijka Artemis ee lagu dego Dayaxa.”
sida oo kale waxa uu sheegay: “Codsiga miisaaniyadda ee aan hadda horkeenayno Golaha iyo Guurtida hadda waxaa ku jira $ 3.2bn oo loogu talagalay 2021-ka oo ah hannaanka soo degitaanka aadanaha. Waana arrin muhiim ah in aan helno $ 3.2bn.”
Waxaana uu ku kacayaa safarkaas lacag gaadhaysa 28 bilyan oo doollarka Maraykanka ah.
Xigashada Sawirka, Lockheed Martin
Mareykanka ayaa wuxuu dhexda u xirtay sidi hawada sare dayax gacmeed uu ugu diri lahaa wuxuuna Mareykanka ku guuleystay 1962-kii, madaxweyne kennedi oo ku dhawaaqay xilligaa inuu dalkiisa dayax gacmeed hawada u dirayo wuxuu yir: “Waxaan doorannay inaan annagu aadno dayaxa!”
Inkasta oo ay Ruushka, Japan, Shiinaha, iyo Hay’adda hawada Yurub, Israa’iil iyo Hindiya ay tijaabooyin ay dayaxa u direen dayax gacmeedyo uu dad la soconna ay dayaxa ka dajiyeen.
Si kastaba ha ahaatee, tallaabbooyinka ay waddamadaasi u qaadeen dhinaca hawada sare ayaa lagu tilmaamay iney xagga teknooloojiyadda horumar ka gaadheen.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54251570original article
Previous articleDowlada Federaalka iyo Wakiillada Beesha Caalamka oo maanta shir yeeshay (Sawirro)
Next articleBooliiska wadan yurub ah oo gacanta ku dhigay tahriibayaal ay Soomaali ku jirto